Amasiko aseSwitzerland: Okungaphezu kukashokoledi namawashi | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | 25/12/2021 13:13 | Cultura, ESwitzerland
I-Las Imikhuba yaseSwitzerland Basabela, ikakhulukazi, emasikweni aseYurophu Ephakathi noma omdabu athinta izici eziningi zokuphila ezweni. Lezi zindawo zisukela ekwaluseni kuye emikhosini ngokusebenzisa i-gastronomy, imikhuba yokuziphatha noma umculo.
Naphezu kobukhulu balo obuncane, izwe laseSwitzerland linenani elikhulu lamasiko aqoshwe ngendlela yokuba yizakhamuzi zalo nokuthi, mhlawumbe, lizokumangaza. Eziningi zivamile kulo lonke elaseYurophu njenge ukugubha ukhisimusikuyilapho abanye bengabomdabu ngempela futhi banezimpande zabo esikhathini esidlule sesizwe. Kodwa, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokukhombisa amasiko angajwayelekile aseSwitzerland.
1 Amasiko aseSwitzerland: kusuka ezilimini kuya ku-gastronomy
1.1 Izilimi zaseSwitzerland
1.2 Umculo oyingqayizivele wamasiko aseSwitzerland
1.3 Imikhosi, ebalulekile emasikweni aseSwitzerland
1.4 Imisebenzi yezandla yaseSwitzerland
Amasiko aseSwitzerland: kusuka ezilimini kuya ku-gastronomy
Sizoqala uhambo lwethu lwamasiko eSwitzerland ngokukhuluma nawe ngezilimi zabo. Khona-ke sizoqhubeka nokubheka ezinye izici ezinjengomculo noma amaphathi futhi, ekugcineni, sizogcina sigxile ku-gastronomy emnandi yezwe laseSwitzerland.
Izindawo zolimi zaseSwitzerland
Ngenxa yendawo ekuyo, iSwitzerland yilapho amasiko ahlukahlukene aseYurophu ehlangana khona. Ngenxa yalesi sizathu, inezilimi ezintathu ezisemthethweni futhi enye eyaziwa kancane ukuthi iphendula umsuka wabantu abawuqambayo.
Ulimi oluningi lubizwa ngokuthi IsiJalimane saseSwitzerland, esikhuluma cishe amaphesenti angamashumi ayisithupha nane ezakhamuzi zakhona. Kubaluleke kakhulu ezindaweni ezisenyakatho, empumalanga nasenkabeni yesizwe. Ngaphezu kwalokho, iningi lamanethiwekhi omsakazo namathelevishini ayayisebenzisa.
Kulandelwa inani lezikhulumi nge Frances, esetshenziswa cishe amaphesenti angamashumi amathathu nesishiyagalolunye enani labantu kanye neningi elisentshonalanga yezwe. Ngaphezu kwalokho, endaweni ye Romandie izilimi zesigodi Franco-Provençal zigcinwa, ezifana i-vaudois noma i i-neuchatelois.
Ulimi lwesithathu lwaseSwitzerland ngu italiano, esetshenziswa ngamaphesenti ayishumi nanhlanu ezakhamuzi zakhona futhi okunengqondo, egcwele eningizimu yezwe. Kukhona futhi ulimi lwesigodi Lombard: the tesinese.
Ukusho okukhethekile kufanele sikwenze uhluke romansh. Luwulimi olusemthethweni futhi, nakuba imibhalo kahulumeni ingadingeki ukuba ulusebenzise. Kukhulunywa ku-canton of Graubünden futhi ingqikithi yenani labantu abayisebenzisayo imele u-0,6% wabantu. Uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi wulimi lwesiRomanesque oluhlobene nesiLadino nesiFriulan olukhulunywa enyakatho ye-Italy, nakuba luthuthuke kakhulu ngokwephimboloji kunalezi.
Umculo oyingqayizivele wamasiko aseSwitzerland
Abaculi abehlukene abacula ngophondo lwe-alpine
Akudingekile ukuthi sikutshele ukuthi eSwitzerland uzwa umculo ofanayo nowaseSpain, EFrance noma i-United States. Kodwa, njengalezi zizwe, nayo inomculo wayo wesintu futhi uzowuthola unelukuluku lokwazi.
Ithuluzi elisezingeni eliphezulu lezwe ucingo uphondo lwe-alpine. Yenziwe ngokhuni futhi inobude obuphakathi kwamamitha angu-1,5 no-3.60, iqondile futhi inomkhawulo ovuthayo. Ikhipha imisindo evumelanayo efana neyecilongo, kodwa umsuka wayo ungowakudala kakhulu.
Okungenani, ihlehlela emuva ekhulwini le-XNUMX, lapho yayisetshenziselwa ukubiza izinkomo endaweni yase-Alpine kanye nokukhulumisana phakathi kwabalimi ngokwabo. Kodwa futhi isetshenziselwa ukuhumusha izingoma zendabuko ze-alpine futhi, ngokumangalisayo, inokufana nezinye izinsimbi ezivela ePyrenees, eCarpathians ngisho nasezintabeni ze-Andes eNingizimu Melika.
Ngakolunye uhlangothi, amaSwitzerland nawo anengoma yendabuko. Kuyinto edumile i-tyrolean. Ibonakala, njengoba ubonile izikhathi eziningi, ngokushintsha okungazelelwe kwethoni, kusukela kokuphansi kuya phezulu ngendlela ye-falsetto. Nokho, akulona eSwitzerland kuphela. Iphinde ingeyesiko le-Alpine ngokujwayelekile, yingakho ihunyushwa e-Austria, enyakatho ye-Italy ngisho naseJalimane. Kodwa, ngokumangalisayo, kunezingoma ezifanayo ezikude njengaseScandinavia noma e-Afrika Ephakathi.
Imikhosi, ebalulekile emasikweni aseSwitzerland
Izwe laseSwitzerland liyigubha Iholide likazwelonke Agasti 1291st. Ikhumbula lokho okubizwa nge-Federal Pact of XNUMX, lapho ama-canton amathathu akhona avuma ukudala izimo ezidingekayo zokubumbana njengezwe. Kuyo yonke indawo yayo, kuba nemicimbi yemikhosi. Kodwa ilukuluku lalo mgubho ukuthi uvunyelwe ukwethula iziqhumane kunoma yimuphi umuntu.
Omunye umkhosi obaluleke kakhulu eSwitzerland uhlobene the transhumance of inkomo. Nakuba, empeleni, kufanele sikutshele ngamaholide amabili. Ngoba zenzeka ekuqaleni kwehlobo nasekwindla. Ngosuku lokuqala, abelusi bayisa izinkomo zabo ezintabeni zase-Alpine ukuze ziklabe ngokukhululeka, kanti kowesibili, bazibuyisela ezibayeni. Kodwa, kuzo zombili lezi zimo, zihlotshiswe ngezimbali nama-cowbell futhi zibukiswa ngodwendwe.
Ngakolunye uhlangothi, phakathi kwamasiko aseSwitzerland kukhona neminye imikhosi yemvelo yendawo, kodwa ebaluleke kakhulu ezweni lonke. Ngokwesibonelo, kuba icala inhloko yehansi eSursse, esingeke sikhulume ngayo nawe kangcono; kwe I-Basel carnival noma kwe Umkhosi wabalimi bewayini eVevey, esifakwe kuGugu Lesiko Lobuntu elingaphatheki yi-UNESCO.
Imisebenzi yezandla yaseSwitzerland
Iwashi lesikhwama saseSwitzerland
Kanye nemimese yephaketheni edumile, izwe laseSwitzerland linomkhakha we-embroidery othakazelisayo. Kudume ukuthi kwe I-St, ehlehlela emuva ekhulwini leshumi nesikhombisa futhi ivelele ikakhulukazi ngomsebenzi wayo wekotini nelineni. Kungashiwo okufanayo ngakho I-Neuenburg bobbin lace futhi of imboni kasilika eZurich, eyaqala ngekhulu XIV.
Okuhlukile isithombe sokhuni sendabuko sikaBrienz, umphumela wawo i-Swiss Museum of Carvings and Sculptures, kanye izitsha zobumba zabalimi Berne, eyaqala ngekhulu le-XNUMX futhi eyaziwa emhlabeni wonke.
Kodwa, uma ubuciko baseSwitzerland buvelele kokuthile, kungenxa yokuthi amawashi abo, eseziphenduke enye yezimboni zezwe. Nokho, akulona isiko lomdabu laseSwitzerland. Wayiswa edolobheni I-Geneva ngamaHuguenot aphephela kulo phakathi nekhulu le-XNUMX.
Lo msebenzi wezandla ngokushesha wasakazekela kwezinye izindawo ezifana Neuenburg, lapho izimangaliso ezifana namawashi ephaketheni e-Taschenuhren noma amawashi e-pendulum adalwe khona. Kusukela ngaleso sikhathi, abaseSwitzerland bazibeke njengabakhi balezi zingcezu ezisezingeni eliphezulu, nakuba sebefinyelele ingqopha-mlando njengewashi lokuqala elingangeni manzi noma iwashi lokuqala le-quartz. Kukhulu ukuhlonishwa kwamaSwitzerland njengabakhi bamawashi kangangoba kuye kwahlongozwa ukuthi kufakwe imisebenzi yezandla yabo efeni elingaphatheki lesintu.
Kodwa-ke, elinye isiko lezwe laseSwitzerland elizalwa ngesikhathi esifanayo nomenzi wewashi awaziwa kakhulu. Sikhuluma ngayo ukwakhiwa kwama-automatons namabhokisi omculo. Kusukela ngo-1770 abazalwane I-Jaquet-droz Bethule ama-androids amathathu amangaza kulo lonke elaseYurophu.
Ngakolunye uhlangothi, ibhokisi lomculo libangelwa U-Antoine uthanda, owayethula ngo-1796 ku-Geneva Society of Arts. Kodwa ukukhiqizwa kwayo ngokushesha kwasakazekela ezifundeni ezifana nalezi Holy Cross o I-Geneva.
Ekugcineni, sizoqeda ukuvakasha kwethu kwamasiko aseSwitzerland ngokukhuluma nawe nge-gastronomy. Ngokuphathelene naye, kwenzeka okufanayo nalokhu esikuchazile ngamawashi. Idumile emhlabeni wonke ushokoledi wezwe laseSwitzerland.
Kodwa-ke, njengoba kungenzeka uyazi, lo mkhiqizo uvela eMelika ngekhulu le-XNUMX. Kunoma yikuphi, ushokoledi waseSwitzerland ngokushesha wathola udumo emhlabeni wonke ngenxa yokupheka okufana nengxube yawo nobisi lwe-Alpine, ngenxa UDaniel peter, noma ushokoledi ukuncibilikaidalwe ngu URodolphe Lindt.
Omunye quintessential umkhiqizo waseSwitzerland ushizi. Izinhlobo zayo ziningi kangangokuthi ungahamba izwe lonke uzizama (zingaba amakhulu amane namashumi amahlanu). Iphutha eliningi libangelwa ubisi oluhle kakhulu oluvela emihlambini ye-Alpine. Phakathi koshizi odume kakhulu esizweni kukhona UGruyère, elimnandi Isisebenzisi noma i Sbrinz, uhlobo olupholile.
Kusuka kulo mkhiqizo kuvela esinye sezitsha ezijwayelekile zaseSwitzerland: the fondue, okungeyona into engaphezu kukashizi oncibilikisiwe odliwa ngokucwiliswa izingcezu zesinkwa esibanjwe ngemfoloko ekhethekile. Iphakelwa embizeni yobumba ebizwa ngokuthi i-caquelón. Uhlobo oluhlukile yi- squeegee, equkethe, ngaphezu koshizi ocibilikile, amazambane aphekiwe angahlutshiwe, u-anyanisi, ukhukhamba, uviniga kanye nesinaphi.
Ngokwengxenye yayo, i i-alplermagronen Kuyisidlo esihlanganisa amazambane e-gratin, i-macaroni, u-anyanisi, ukhilimu noshizi futhi sinikezwa ngokuhlotshiswa kwama-apula ahlungiwe. Futhi i rösti Iwuhlobo lwe-omelet yamazambane, kodwa ngaphandle kweqanda, ngoba ibopha nesitashi se-tuber ngokwayo.
Ngokuqondene nesidlo sasekuseni saseSwitzerland, mhlawumbe esidume kakhulu yilokho okubizwa ngokuthi i-birchermuesli, eyenziwe ngejusi kalamula, ubisi olujikisiwe, i-oats egoqiwe, ama-apula agayiwe nama-alimondi noma ama-hazelnuts.
Ngokwengxenye yayo, i zürcher geschnetzelte Yinyama yenkomo ephakelwa ukhilimu usoso, amakhowe kanye ne-rösti. Futhi i ubhiya Yinguqulo yaseSwitzerland yamasoseji aseJalimane. Mayelana neziphuzo, i Ijusi le-Apple Idume kakhulu kanjalo ne-cider newayini.
Sengiphetha, sikubonise ezinye zefayili ye- Imikhuba yaseSwitzerland. Kodwa akhona amanye anelukuluku kakhulu njengalawo ahlobene nawo imvunulo yesifunda; izingcingo iholidi lokuvuna, namuhla sehliselwe ekubeni iholide lapho kudliwa khona amasoseji futhi kuphuzwe newayini, noma umdlalo wezwe oyingqayizivele wezwe: the hornussen, okuhlanganisa, ukukhuluma ngokubanzi, ukuphonsa i-disc ngangokunokwenzeka. Ukwazi wonke lawa masiko ezwe laseSwitzerland, udinga nje ukulivakashela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » ESwitzerland » Imikhuba yaseSwitzerland